Malunga nathi-i-Nanchang B-land Shoes Manufacturing Co., ltd.
Inkampani yethu, iNanchang B-LAND Trading Trading CO., LTD, ibekwe kwisixeko saseNanchang, kwiphondo laseJiangxi, China. Umzi mveliso wethu ophetheyo ugubungela indawo yomhlaba engama-28,000sqn, iindibano zocweyo ezisemgangathweni ezingama-30,000sqm, kwaye ezinokubamba abantu abangaphezulu kwama-200 ukuba basebenze, nelilishishini elikhulu lokuvelisa eJiangxi.
Sifundile kwaye saphuhliswa kwindawo yezihlangu ngaphezulu kweminyaka engama-20. Inkampani yethu inombono wolawulo wokuba "uMgangatho uQinisekisa amandla, Iinkcukacha ziya kufikelela empumelelweni", kwaye izama konke okusemandleni ethu ukwenza kakuhle nakweliphi na inqanaba kwinyathelo ngalinye, inqaku ngalinye lenkqubo yokuvelisa ukuya kuhlolo lokugqibela, ukupakisha kunye nokuhambisa.
Sigxininisa kumgaqo wophuhliso lomgangatho ophezulu, ukusebenza ngokunyaniseka kunye nendlela yokusebenza ephantsi yokubonelela ngenkonzo efanelekileyo yokuqhubekeka! Siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba utyelele inkampani yethu okanye uqhagamshelane nathi ngentsebenziswano!
Inkampani yethu iyilo loyilo kunye neqela lophuhliso, ngokuhambelana neemfuno zabathengi kunye neendlela ezikhoyo emhlabeni, zihlala zivelisa uyilo olutsha kunye nophuhliso ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
Ububanzi beshishini: izihlangu: iibhutsi \_ moccasin \_ isiliphu sangaphakathi kunye neemveliso zolawulo.
Abathengi beMane: iBass Pro. \_ C & J Clark \_ Landsend \_ Talbots \_ Wal-Mart \_ Blair.
Sisoloko sisendleleni, sikhatshwa ngu-CEO uSimon Wu, sikhula kwaye sikhula kakuhle.
Silapha ngokunyanisekileyo siyakwamkela ukuba undwendwele umzi-mveliso wethu kwaye simisele ubuhlobo obuhle bexesha elide kunye nathi. Siza kulungiselela kunye nomgangatho wethu olungileyo kunye neengcali zethu kwizihlangu.
Ngo-1982 evela kutatomkhulu wakhe xa wayengumfundi wamabanga aphakathi kwaye kwiminyaka emibini ezayo wazi ubuchwepheshe kunye nobuchule bokwenza izihlangu ezifanelekileyo. Ngelishwa utatomkhulu wakhe wasweleka ngo -1984 kwaye kwangalo nyaka, waya eyunivesithi emva kokuphumelela ukungena kwiimviwo kwaye waba sisimanga kwiYunivesithi yaseJiangxi (eyandulela iYunivesithi yaseNanchang).
Ngo-1988 wafumana inkululeko kwaye wabelwa inkampani yorhwebo lwangaphandle ethengisa iiporcelain.
Ngo-1992 watshintshelwa kwinkampani entsha apho waqala khona ukwenza ishishini lezihlangu nelaliyeyona nto iphambili kuye, waduma ngokukhawuleza kwinkampani kwaye wanyuselwa waba ngumphathi wesebe lezihlangu ngo-1994 Ngexesha leminyaka wafumana amabhaso amaninzi ngenxa umsebenzi obalaseleyo.
Ngo-1998 washiya umsebenzi wakhe waseka eyakhe inkampani egxile ekuthengiseni izihlangu kuphela nakwimveliso.
Siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba utyelele inkampani yethu okanye uqhagamshelane nathi ngentsebenziswano!
-Nanchang B-Umhlaba woRhwebo ngokuThengisa, Ltd.
Hayi, 1299, Dongsheng Avenue, Qingshanhu District, Chang Dong Industrial Zone, Nanchang, JX.China
I-Intanethi yeCanton Fair ekwi-Intanethi ikhuthaza ...
Umzi-mveliso wezihlangu eBangladesh